ကီမီဂါယို - ဝီကီပီးဒီးယား
(ကီမီဂါယော့ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
အမျိုးသား anthem of ဂျပန်
ယိုရှိဆ အိုခု နှင့် အခိမိုရိ ဟယရှိ ( ဖရန့်အက်စ်ကာ, ၁၈၈၀)
၁၈၈၈ (de facto, by the ဂျပန် အင်ပါယာ); ၁၃ ဩဂုတ်လ ၁၉၉၉ခုနှစ် (de jure)
၁၉၄၅ ( ဂျပန် အင်ပါယာ)
ကီမီဂါယို (君が代?, ဂျပန် အသံထွက်: [kimiɡajo]; "His Imperial Majesty's Reign's Reign")သည် ဂျပန်ပြည်၏ နိုင်ငံတော်သီချင်း ဖြစ်သည်။ ကီမီဂါယော့ တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတော်သီချင်းစာသားများထဲတွင် သက်တမ်းရင့်သည့် သီချင်းစာသားဖြစ်သကဲ့သို့ စကားလုံး ၃၂လုံးသာပါဝင်သော ကမ္ဘာအတိုဆုံး စာသားဖြစ်သည်။ ဤစာသားများကို ဝါကာကဗျာမှ ကူးယူရေးသားခြင်းဖြစ်ပြီး wakao ဟေဣယန်ခေတ် (၇၉၄–၁၁၈၅),အမည်မသိစာဆိုတစ်ဦးရေးသားခဲ့သည်။ and the current melody was chosen in 1880, replacing an unpopular melody composed by John William Fenton eleven years earlier. While the title "Kimigayo" ဘာသာပြန်ကြည့်လျှင် "ဧကရာဇ်မင်းမြတ်နန်းစံပြီ ", no official translation of the title or lyrics has been established in law.
၁၈၈၈ မှ ၁၉၄၅ အထိ "ကီမီဂါယို" သည်ဂျပန်အင်ပါယာ၏ နိုင်ငံတော်သီချင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၄၅ခုနှစ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် လက်နက်ချ ပြီးနောက်အင်ပါယာပြိုကွဲသွားသည့်အခါ ဂျပန်နိုင်ငံသည် ၁၉၄၅ တွင် ၎င်းသီချင်းကို ဆက်လက်သီဆိုခဲ့ကြသည်။ ဤ ဆက်ခံသူပြည်နယ် သည် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ခဲ့ပြီးထို မူဝါဒ သည် ဧကရာဇ် အချုပ်အခြာအာဏာ ကိုအခြေခံသည့်စနစ်မှ လူကြိုက်များသောအချုပ်အခြာအာဏာ ကိုအခြေခံသည့်စနစ်သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော် ဧကရာဇ် ဟီရိုဟီတို နေရာဖယ်ရှားမခံခဲ့ရသကဲ့သို့ "ကီမီဂါယို"သည်လည်း အမျိုးသား အတိုက်အခံ နိုင်ငံတော်သီချင်းအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတော်အလံနှင့်နိုင်ငံတော်သီချင်း ဆိုင်ရာအက်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ၎င်းတို့ကို နိုင်ငံတော်၏ တရားဝင် ဧကရာဇ်၏ ဘုန်းတော်ဘွဲ့နှင့်နိုင်ငံတော်သီချင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါသည်။
တီဗီ Asahi အားဖြင့်ကောက်ယူတဲ့စစ်တမ်းအရအများစုဂျပန်ကလူကိုတောင်၏ကျမ်းပိုဒ်မတိုင်မီအရေးပါသော, သေးတဲ့အငြင်းပွားဖွယ်သီချင်းအဖြစ် "Kimigayo" ရိပ်မိ အမျိုးသားအလံနှင့်နိုင်ငံတော်သီချင်းအပေါ်အက်ဥပဒေ 1999 ခုနှစ်  သို့သော် Mainichi Shimbun မှပြုလုပ်သောနှစ်တွင်ပင်ပြုလုပ်သောစစ်တမ်းတစ်ခုတွင်ဖြေဆိုသူအများစုသည်နိုင်ငံတော်အားနိုင်ငံတော်သီချင်းဖြစ်စေသည့်ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်ခြင်းသို့မဟုတ် Diet သည်ထိုကဲ့သို့သောဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းရာတွင်အချိန်ပိုယူသင့်သည်ဟုယူဆခဲ့သည်။  ၀ င်ခွင့်နှင့်ကျောင်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားများတွင်သီချင်းကိုသီဆိုရမည့်ဂျပန်ကျောင်းသားများက၎င်းတို့သည်သီချင်းစာသား၏ရှေးဟောင်းနှင့်ခေတ်မမီတော့သောဘာသာစကားကိုနားမလည်နိုင်ကြောင်းနှင့်၎င်း၏သမိုင်းဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများအပေါ်ပညာမသင်ကြားကြကြောင်းပြောကြသည်။  ကျောင်းဖွင့်ပွဲများတွင်နိုင်ငံတော်သီချင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများမှာဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ခန ( ဟိရဂန ) 
ဂျပန်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတော်သီချင်းသည်စစ်ပြီးခေတ်သမိုင်းအရကမ္ဘာပေါ်တွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။  ကျောင်းများ သည်၎င်းနှင့်အမျိုးသားအလံနှစ်ခုလုံးအတွက်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအချက်အချာဖြစ်သည်။ တိုကျိုပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့သည်၎င်းတို့၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်ရှိဖြစ်ရပ်များတွင် "ကင်ဂျီအို" နှင့်အလံအသုံးပြုမှုလိုအပ်သည်။ အမိန့်အရကျောင်းဆရာများသည်သင်္ကေတနှစ်ခုလုံးကိုလေးစားရန်သို့မဟုတ်အလုပ်ပြုတ်ရန်အတွက်လိုအပ်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ဟီရိုရှီးမားမှ ဆရာများစွာကဟီရိုရှီးမားပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကထိုအရာကိုတောင်းဆိုရန်တောင်းဆိုစဉ်တွင် ဓမ္မသီချင်းကို ငြင်းပယ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ သူတို့အကြားတင်းမာမှုများပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှဒုကျောင်းအုပ်တစ် ဦး မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်လည်းအိုဆာကာတွင်အလားတူအဖြစ်အပျက်မျိုးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင်ဆရာ ၃၂ ဦး ကသီချင်းသီဆိုခြင်းကိုငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ 2011 ခုနှစ်ကိုးကပိုဆရာများအခြား 2012 ခုနှစ်တွင်ရှစ်အတူပုန်ကန်ပူးပေါင်း  အိုဆာကာ မြို့တော်ဝန်ဟာ ရှီမိုတိုတိုရူ က“ နိုင်ငံတော်သီချင်းကိုမသီဆိုခြင်း၏စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောရာဇ ၀ တ်သားများအနေဖြင့် [အများပြည်သူ] ပေါ်ထွက်လာခြင်းမှာကောင်းသည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။  အချို့ကဤကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဟာချိုးဖောက်ကြောင်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း နှင့် "အတွေး၏လွတ်လပ်ခွင့်, ယုံကြည်ချက်နှင့်ဩတ္တပ္ပစိတ်" အပိုဒ်ထဲမှာ ဂျပန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ,  ပေမယ့်ဘုတ်အဖွဲ့ကျောင်းများအစိုးရအေဂျင်စီများဖြစ်ကြကတည်းကကြောင်းစောဒကတက်ထားပါတယ်, သူတို့ရဲ့န်ထမ်း ကောင်းမွန်သောဂျပန်နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်ကျောင်းသားများကိုသင်ကြားရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဆရာများသည် Hinomaru နှင့် "Kimirimo" ကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက်ဆရာများအားအမိန့်ပေးသည့်အတွက်ဆရာများကတိုကျိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Shintarō Ishihara နှင့်အဆင့်မြင့်အရာရှိများအားရာဇ ၀ တ်မှုတိုင်ကြားမှုမအောင်မြင်  အစောပိုင်းအတိုက်အခံပြုပြီးနောက် ဂျပန်ဆရာများသမဂ္ဂ သည်အလံနှင့်နိုင်ငံတော်သီချင်းနှစ်ခုလုံးကိုလက်ခံသည်။ သေးငယ်သည့်ဂျပန်ဆရာများနှင့် ဝန်ထမ်းများသမဂ္ဂသည်ကျောင်းစနစ်အတွင်းသင်္ကေတများနှင့်အသုံးပြုမှုကိုဆန့်ကျင်နေဆဲဖြစ်သည်။ 
ဂျပန်၏ Imperial အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်
Rising Sun အလံ
↑ Japan – Kimigayo။
↑ "Elementary schools face new mandate: Patriotism, 'Kimigayo'"၊ The Japan Times Online၊ 2008-03-29။
↑ (in ဂျပန်).
↑ (in အင်္ဂလိပ်).
↑ ၆.၀ ၆.၁ 国旗及び国歌に関する法律
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named MOFA
↑ Hood၊ Christopher (2001)။ Japanese Education Reform: Nakasone's Legacy။ Routledge။ p. 166။ ISBN 978-0-415-23283-8။ 2010-10-13 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Politika i ekonomija (Upoznajte Japan) (in Serbian)။ Japanska ambasada u Srbiji i Crnoj Gori (2003)။ 2010-04-28 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-05-17 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Republic or Death! Travels in Search of National Anthems။ Windmill Books။
↑ 8 Osaka teachers to be punished for refusal to sing national anthem။ Japan Today။ February 25, 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Teachers Who Refused To Sing National Anthem Face Punishment။ Beth။ March 6, 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Citizenship Curriculum in Asia and the Pacific။ Springer။ 2010-10-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Japan Times. Ishihara's Hinomaru order called legit [archived6June 2011; Retrieved 2007-12-04].
↑ Heenan 1998
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကီမီဂါယို&oldid=745397" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃၁ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၅:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။